शुन्य समयमा कांग्रेसद्धारा पैसाको चलखेल - Halesi Khabar
शुन्य समयमा कांग्रेसद्धारा पैसाको चलखेल
१३ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:१७ ।
स्थानीयले गराए कबुलियतनामा कागज
शुक्रबार १३ मंसिर । खोटाङ जिल्लामा हुन लागेको उप निर्वाचनको शुन्य समयमा पैसा बाँढन गएका कांग्रेस नेताहरुलाई स्थानीयले लखटेका छन । खोटाङको साकेला गाउँपालिका वडा नं ३ खिदिमामा यहि १४ गते हुन लागेको वडाध्याक्ष पदको उप निर्वाचनको शुन्य समयमा कांग्रेस नेता सुवास पोखरेल, कांग्रेस क्षत्रिय सभापति तिर्थराज भट्टराई, लगायतलाई स्थानीयले घेराबन्दीमा पारेका थिए ।
निर्वाचनको शुन्य अवधीमा पालिका भन्दा बाहिरका कुनैपनि पार्टीका नेता कार्यकर्ता निर्वाचन हुने वडामा नछिर्ने सर्वदलिय सहमती गरेको भएपनि कांग्रेसका नेताहरुले यसलाई उलंघन गरेका छन् । सबै दलको जिल्ला तहका नेताहरु बसेर गरेको सहमतीको मसी सुक्न नपाउँदै यसको बर्खिलाप गरेको भन्दै नेकपा खोटाङले विरोध जनाएको छ ।
शुन्य अवधी शुरुभएको दिन मंसिर १२ गते कांग्रेसका नेताहरुले खिदिमामा पसेर अराजनीतिक हर्कत गरेको समेत बुभिएको छ । उनिहरुले कांग्रेससँग साईनो सम्बन्ध रहेका व्यक्तिको मलामी गएर गोजिबाट झण्डा झिकेर ओडाएको कुरा समेत बाहिर आएको छ । मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिने स्थानमा पुगेर कांग्रेस नेताहरुले आफ्नै पार्टीको झण्डाको समेत दुरपयोग गरेका छन् ।
दिनमा गाउँमा भेटघाटमा व्यस्त बनाएका कांग्रेस नेताहरुले राती भने पैसा र रक्सी बोकेर गाउँमा पसेको जानकारी पाएपछि स्थानीयले पिछा गरेका थिए । उनिहरुलाई खिदिमा स्थीत साविक वडा नं ६ को काँडेमा स्थानीयले भेटाएका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेला परेका उनीहरु घरको जस्केलाबाट निस्केर भागेका थिए ।
उनिहरु भाागेर गएपनि साकेला गाउन्ँपालिका वडा न४ का निर्वाचि वडा सदस्य तथा कांग्रेस नेता जीवन श्रेष्ठलाई भने स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर कागज गराएका थिए । उनले कागजमा अवाञ्छित गतिविधी स्वीकार गर्दै आवश्यकता पर्दा सुवास पोख्रेल, तिर्थ भट्टराई लगायतका उक्त घटनामा संलग्न नेताहरु उपस्थित गराउने कबुलियतनामा कागज समेत गरेका छन ।
वृद्धवृद्धाको बिसाउनी थलो दिवा सेवा केन्द्र
सुरक्षाको चुनौति बढेकै हो त ?
गाउँपालिकाको स्कारपियोमा आगजनी
जालपामा शुरु भयो ग्रामीण आँखा क्लिनिक
हिरा गुरुङको कुर्तकले सहमतीमा बाधा
खोटाङमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट ११ करोड ५० लाख
१. वृद्धवृद्धाको बिसाउनी थलो दिवा सेवा केन्द्र
२. सुरक्षाको चुनौति बढेकै हो त ?
३. गाउँपालिकाको स्कारपियोमा आगजनी
४. दिक्तेल बोर्डिङ स्कुलले चुम्यो उपाधी
५. जालपामा शुरु भयो ग्रामीण आँखा क्लिनिक
६. हिरा गुरुङको कुर्तकले सहमतीमा बाधा